Fankalazana telo sosona teto amin'ny FJKM Ambalavao isotry
Ny alahady 12 novambra 2017, tamin'ny 9ora maraina, no nankalazaina teto amin'ny FJKM Ambalavao Isotry ny fankalazana telo sosona. Fankalazana telo sosona no notanterahina: 1 ny andron-jobily, 2 ny fety ny taranaka (70 afa-panadinana), 3 ny faha-145 taonan'ny nanorenana ny Fiangonanana Ambalavao Isotry(1872-2017).
1. Ny andron-jobily
Natao indrindra handraisan-tanana ireo mankalaza tsingerin-taona faha-10 no ho mihoatra teo amin'ny nahavitàna batisa, ny nanokanana ho mpandray, ny nahavitàna fanamasinana mariazy, ny nanokanana ho diakona na loholona na mpiandry na naha-biraon-tsampana na fikambanana.
Batisa Mpandray Mariazy Loholona Diakona
22 32 7 1 4
Biraon-tsampana Mpitoriteny Mpiandry Katekista Fitambarany
2 1 4 2 75
2. Ny fety ny taranaka
Vao roa taona monja no niroso tamin'izany fety ny taranaka izany ny FJKM Ambalavao Isotry. Tsapa mantsy fa tsy mba nisy fotoana izay nihaonan'ny taranaka mihitsy afa-tsy ny famangiana ataon'ireo sendra mandalo eto. Nanomboka ny taona 2016 no nampidirina ho isan'ny hankalazaina izany vaninandro izany. Hatreto aloha dia mbola mifanindran-dalana amin'ny andron-jobily izany; ny hihaona sy hanangana izay ho birao hitantana sy hamaritra fandaharana hihaonan'ny taranaka ao anatin'ny taona no tanjona. Tsy mbola tontosa izany tao anatin'izay roa taona nampivondronana ny taranaka izay. Manantena isika fa rehefa mitohy izao fankalazana isan-taona izao dia ho tratra ihany io tanjona io.
Nahatratra 1200 eo ho eo ireo tonga nihaona tamin'ity taona 2017 ity. Ny 33 tamin'izy ireo dia ireo Zokiolona mihoatra ny 70 taona. Ramatoa RAHARISOA no zokiny indrindra tamin'ny vehivavy, 92 taona izy ary ny lehilahy kosa dia Andriamatoa RAJAONARIVELO Théodoret, mpitandrina misotro ronono izay feno 90 taona katroka ny 15 novambra 2017 iny raha ny fantatra.
Noraisin-tanana sy nampaherezina nandritra ny fanompoam-pivavahana ireo zokiolona raiamandrenintsika ireo. Ary ny mpianakavy ny finoana sy ny mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ny FJKM Ambalavao Isotry dia mirary azy rehetra ho salama tsara tsy harofy. Dia ho tratry izay ela indrindra o!
Crée le dimanche 25 mars 2018 à 15:53:29
\_"Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho;\_" 2Tim.4:7 Ampandrenesina isika mpian[. . .]
Nosokafana omaly 24 -27 Aprily 2018 ny Fampirantiana karakarain’ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka FJKM mahakasika ny fanamari[. . .]
Antsam-panahy Ny Mpitory sy ny SOLOFO Ambalavao Isotry
Isaorana anie Andriamanitra fa nizotra araka ny tokony ho izy ny antsam-piderana izay notontosain\_'Ny Mpitory sy ny SOLOFO Ambal[. . .]